Siria: Mahatonga Hatezerana Sy Alahelo Ny Famonoana olona Tany Traymseh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2012 3:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Ελληνικά, Dansk, Български, Português, 繁體中文, 简体中文, English
Tamin'ny herintaona, ny alina nialoha ny volana masin'ny Ramadany, ireo mpitandro filaminana Siriana izay tokam-po amin'ny fitondràn'i Bashar al-Assad dia namono olom-pirenena manodidina ny 45 tany amin'ny renivohitr'i Hama.
Araka ireo mahery fo, manodidina ny 220 ireo olom-pirenena maty novonoina tao an-tanàna tamin'ny 12 Jolay, anisan'izany ny fianakaviana iray manontolo miisa telo be izao. Manoratra ilay mpanoratra sy mpitoraka blaogy Siriana, Rime Allaf:
@rallaf: Vaovao momba ny vono-olona hafa indray tany #Siria, faritanin'i ‪#Hama‬ : 220 no maty, maro ireo voatsatoky ny antsy, na zaza aza, fianakaviana iray manontolo miisa telo.
@LeShaque: Tsy haiko na mampalahelo na mahakivy na inona rehefa “efa fahita” no havalin'ny olona iray amin'ilay vono-olona. ‪#Syria‬
@KareemLailah: Hatramin'izao dia mbola betsaka ny Siriana any milevina mitaha amin'ny ety ambonin'ny tany. #Syria
@LeShaque: Mood, Annan, Ban, ny UNSC dia samy hanameloka ilay vono-olona fa tsy ny nanao azy, tahaka ny hoe maty tampoka teo fotsiny ireo olona ireo. #Syria
@AmbassadorRice: Mampanonofy ratsy ny tatitra momba ny #TraymsehMassacre – mampiseho tsara ny tokony hisian'ny fepetra hentitra avy amin'ny #UNSC ho an'i #Siria.
NuffSilence dia sady maneso no mampahatsiahy ireo mpamaky azy ny momba ilay Ministeran'ny Fampihavanam-pirenena vao natsangana:
@NuffSilence: Tsara ny manamarika fa ity no famonoan'olona voalohany tahaka izao teo ambanin'ny Ministeran'ny Fampihavanam-pirenena (izay nireharehan'i Bashar tamin'i Annan)
@SafaaSankari: Maherin'ny 200 ireo olona novonoina tamin'ny #TraymsehMassacre #Siria androany; tanàna izay tsy fantatro akory hoe nisy taty Siria nefa fantatro izao noho ireo vono-olona ireo 🙁
@Ugariti_Homsi: Fahitalavi-panjakàna Siriana: “nosamborina ireo mampihorohoro nanatanteraka ny #TraymsehMasscare” Andriamanitra ô, tapaka lalàn-dra izao dieny izao eto aho!! #Liars
@HamaEcho: AJM mampiseho lahatsary dimy samihafa an'ireo tolona hanohanana an'i Treimseh androany alina. ‪#Syria‬